Nezingubo utshela abanye mayelana izinzwa zakho zokunambitha zaba kanye nesitayela, mayelana isimo sezenhlalo nokuhlanzeka. Kuphela abantu abangenalwazi bayakwazi ukusho ukuthi izingubo Angiqondile lutho. Ethonya wokuqala ukubukeka yomuntu. Nezingubo futhi anazo ikhono ukugcizelela izimfanelo zakho ufihle amaphutha, okuyinto ebaluleke lapho ngezabelo okubeka obala nokungapheleli sibalo. izingubo ekhethwe kahle - yisibambiso impumelelo kokuqala. Kubalulekile kakhulu ukuba ukwazi pick up izinto ngokuhambisana imingcele futhi Imizimba. Yingakho etafuleni emhlabeni osayizi izingubo Letingcikitsi kumele kube kuleto kuwo wonke umuntu.
"Imikhomo" Basic ukukhethwa izingubo yilezi:
1) umbala ofanayo izingubo tsvetotipu umuntu;
2) Kufaneleka usayizi izingubo Ubukhulu umzimba;
3) ofanele sibalo isitayela izingubo;
4) ukudluliselwa isitayela ukuphila kanye nesimo indoda ku isitayela sokugqoka ;
5) dresskod, okumele waphawula njengoba usuku nobusuku;
6) e mkhuba imfashini.
Yiqiniso, zonke lezi zici zibaluleke kakhulu, kodwa uma Amathrendi, yokugqoka kungenziwa indiva ke wagqoka disparate ngobukhulu ukuthola into okungenani ungakhululekile. Nezingubo kufanele priori ngokuhambisana imingcele yakho kweqiniso. Ithebula afanayo izingubo osayizi uthi ukuzimisela lemali ezivezwa imingcele ezintathu: esifubeni, okhalweni, okhalweni. Izingubo akufanele Ibhande sibalo, kodwa futhi akufanele hang (uma kungenziwanga Kusolwa ngesitayela). Okuvame kakhulu iphutha abesifazane ukukhethwa izingubo usayizi esingaphansi noma enkulu kunemicebo yangempela ( "indawo ukukhula"). Ngokuvamile, amantombazane nge amafomu angajwayelekile nzima ukukhetha izingubo zakhe ezitolo, ngoba lokuthunga olwenziwa izilungiselelo ekahle dummies. Yingakho indlela engcono kakhulu ukugcizelela izikhathi evumayo of engavamile Umumo izintokazi - ekuhlanganiseni studio noma bebodwa. Esikhathini studio wena kuzosusa izilinganiso kwesokudla, ukunquma usayizi izingubo futhi silungise ngokuqinile phezu sibalo.
Ukukhethwa izingubo ku figure
Uma ufuna ukwenza izinto sibahle, ngalesosikhathi you azi ukuthi kukhona izinhlobo eziningi izibalo besifazane:
1) "ipheya" (emahlombe ewumngcingo, okhalweni ububanzi). Uma ingxenye engezansi somzimba ngobubanzi okuningi kuka phezulu, udinga izingubo, ongaboni sithuthukisa libanjwe futhi ifihla okhalweni. Kungaba jackets, amahembe side, amabhantshi. Sebenzisa scarves ukugxila esifubeni, musa ukugqoka ibhulukwe egqamile futhi iziketi. Nge lolu hlobo sibalo kanzima ukukhetha izingubo, ngakho indlela engcono kakhulu ukuphuma - suit.
2) "hourglass" (kunomahluko omkhulu phakathi okhalweni nasesifubeni, izinqulu). I enhle sibalo zesifazane yabakhanga amadoda. Girls nge sibalo yalolu hlobo lucky, njenganoma yikuphi izingubo isitayela ngeke ezibukeka zizinhle.
3) "apula", "ibhokisi" (umqulu alinganayo esifubeni, okhalweni okhalweni). Abesifazane onethonya, kubalulekile ukugxila imilenze, esifubeni endaweni, ukuze agcizelele ukuthi umugqa okhalweni.
4) "unxantathu" (emahlombe, esifubeni obanzi kuka okhalweni). Udinga lusichezukise emahlombe, egcizelela phansi isiqu. Khetha enhle usayizi izingubo kulesi simo esinzima, kodwa ithebula izingubo osayizi emazweni ahlukahlukene kuzokusiza nale.
Uhlu izingubo osayizi emazweni ahlukahlukene futhi kufaka phakathi isiNtaliyane, isiFulentshi, isiNgisi, isiJalimane igridi ntathu, kodwa standard American (international). Ubukhulu Kulebulwe ngesiNgisi izincwadi S, M, L, futhi XS, XL, XXL futhi XXL. Amazinga "ES", "EM" futhi "EL" athobele sibalo ukhuphuka uvela 155 cm 175 cm nge isisindo 45-75 kg. Okulinganayo yalezi osayizi eRussia kusukela 42 kuya ku-48 ubukhulu, XS - 40 ubukhulu izingubo, XL-50-52, XXL-54. German (German) Usayizi izingubo, isibonelo, ihlukile Russian -6 futhi -4 ngesiFulentshi. Ngokwesibonelo, ezivame kakhulu emantombazaneni 42 Russian usayizi-isifuthefuthe-8 e-US, 36 e-Europe; 46 - 12 - 40, ngokulandelana, no-50 - 16 - 44. Uma oda izingubo nge-Internet noma ukuhamba emhlabeni, uyazi , European usayizi izingubo kuyadingeka kanye Russian futhi American. Kunetafula ahlukene izingubo osayizi emazweni ahlukene, izingubo zangaphansi, amasokisi kanye amasokisi amade.
Ngo ithebula Russian ifingqa izilinganiso 40 kuya ku-60 nge esifubeni abafanele girth, okhalweni kanye okhalweni. Uma sokukhomba uhlelo US ke khumbula ukuthi uma kuqhathaniswa Russian izingubo izinto kusuka Melika kukhona ibe banzi, futhi bevela eChina Korea, isibonelo, emincane futhi iDemo.
Cropp - izingubo kubantu abasha, ne Ukugcizelelwa ubuntu
Ingubo yomshado Habib: ukuphelela kuhlangana nemiphumela ethile engathandeki encane
Amakholi wevidiyo nevidiyo amasevisi umhlangano shayela / contact izikhungo.
Ukumboza gel ukuvenisha - izinzuzo kanye nobuchwepheshe
Komarov Andrey Ilyich: biography, imisebenzi, impilo yomuntu siqu kanye namaqiniso ezithakazelisayo